के हो गुर्जो ? कसरी खाने ? के-के छन् फाईदाहरु ? - krishipost.com
यी देशमा पाइन्छ
भौगोलिक हिसाबले उष्ण तटीय क्षेत्रमा पाइन्छ । एशियाका नेपाल, भारत, चीन, श्रीलंका, म्यानमार, थाइल्याण्ड, मलेसियालगायतका मुलुकमा पाइन गरेको छ ।
यो जस्तोसुकै माटोमा पनि हुर्कन्छ । गर्मी ठाउँमा राम्ररी हुर्कन्छ । यसका लहरा फागुन/चैततिर काटेर रोप्न सकिन्छन् । पानी दिइरहँदा विस्तारै पलाउछन् ।
यो लहरा दुई वर्षपछि मात्र प्रयोग गर्न मिल्छ । लहरालाई ५–७ सेमी लामा हुनेगरी काट्नु पर्छ । साना साना टुक्रालाई फेरि चार फ्याक गरेर काटेर सुकाइन्छ । यसलाई मुग्रोले थिचेर पनि राखिन्छ । एक हप्ता जति घाममा राम्ररी सुकाएपछि प्रयोग गर्न मिल्छ । यसको भण्डारण गरेरपछि पनि प्रयोग गर्न मिल्छ ।